Shesh Dahal's Blogs: June 2013
कालो पैसा कुनै समस्या ??
“नेपालमा पैसा कमाउन साह्रै सजिलो छ, तर त्यसलाई सेतो पो कसरी बनाउनु, अख्तियारको आँखा लागे त खरानी नै भइन्छ” मेरा एक सरकारी जागिर खाने मित्रले दुःख पोख्दै भने । उनको कुरा सुन्दा लाग्छ कि उनको कमाउने कुनै सिमा छैन, मात्र समस्या छ कि त्यो कालो पैसालाई कसरी सेतो बनाउने र अख्तियारको आँखाबाट टाढा रहने ।
यस्तो समस्या मेरा मित्रलाई मात्र नभई धेरैको समस्या रहदै आएको छ । यदि तपाईले कमाएको कालो धनलाई तपाईले कानुनी रुपमा कमाएको पुस्टि गर्नसके त्यो धन तपाईको सेतो धनको रुपमा परिबर्तन हुन सक्दछ । मैले यस्तै समस्याको सेरोफेरोमा रहि नेपालको कानुन खोतल्दा कालो पैसालाई कानुनी रुपमा बैध सम्पत्ती बनाउन नेपालमा धेरै कानुनी कमजोरीहरु रहेको पत्ता लगाएको छु । केहि ज्यादै न्युन लागतमा उपलब्ध कानुनी कमजोरीहरु निम्नानुसार छन् ।
कानुनी कमजोरी १: कालो प्लेटको सवारी साधन
सबैभन्दा कम लागतमा कालो सम्पत्ती लाई बैध सम्पत्ती यो उत्तम कमजोरीको रुपमा यो कमजोरीलाई लिन सकिन्छ । नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को अनुसुचि १ को दफा १(१३) अनुसार तपाईले सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्ति भएमा तपार्ईले सो सवारी साधनबाट जति रकम कमाएपनि यसरी तिरेको कर नै अन्तिम हुने छ । बार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने कर यसप्रकार छ ।
(क) मिनिबस, मिनि ट्रक, ट्रक र बस रु. १,५००।–
(ख) कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस रु. १,२००।–
(ग) थ्रि ह्विलर, अटो रिक्सा, टेम्पो रु. ८५०।–
(घ) ट्रेक्टर र पावर टिलर रु. ७५०।–
अब तपाईले आफ्नो कालो धनलाई कालो प्लेटको सवारी साधनबाट कमाएको सम्पत्तीको रुपमा चित्रित गर्दै कर बिबरण भर्नुहोला । यसका लागि तपाईको आफ्नै नाममा सवारी साधन दर्ता हुनु पर्दछ । मानौ, तपाईको रु. एक करोड कालो धनलाई सेतो धन बनाउनुपर्ने भएमा, तपाईले कर बिबरण भर्दा त्यो रकमलाई कालो प्लेटको सवारी साधन आय भएको रकम भनि प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । तर याद गर्नुहोला, त्यो रकम प्राकृतिक रुपमा प्राप्त भएको आय जस्तो देखिनु पर्दछ ।
कानुनी कमजोरी २: रेमिट्यान्स आय
बर्तमान स्थितिमा बैदेशिक रोजगारीमा नगएको घर परिवार भेट्न हम्मे हम्मे पर्छ । नेपालको आयकर ऐन अनुसार कोहि ब्यक्ति ३६५ दिनको अबधिमा १८३ दिन वा सो भन्दा बढि अबधि बिदेशमा बसेर आय आर्जन गरेको रकममा नेपालमा कर लाग्दैन । यो कानुनी कमजोरीको उपयोग गर्न तपाईको कालो धनलाई तपाईले बिदेशबाट प्राप्त आयको रुपमा चित्रित गर्नुपर्दछ । यसरी चित्रित गर्दा तपाईले केहि औपचारीकता भने पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ, जस्तो कि तपाईले तपाईको कालो भनलाई बिदेशबाट प्राप्त भएको आय भनि प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । यसरी प्रमाणित गर्न तपाई वा तपाईको परिवारको कोहि ब्यक्ति बिदेशमा अनिबार्य १८३ दिन भन्दा बढि बसोबास गरि आय आर्जन गरेको हुनुपर्दछ । अब, तपाईले आफ्नो कालो धनलाई हुन्डी वा अन्य अनौपचारीक बाटोबाट बिदेश पठाउनुहोस । त्यसपछि, तपाई वा तपाईको ब्यक्तिले त्यो रकमलाई रेमीट्यान्स, बैक मार्फत वा कुनै औपचारीक माध्यमबाट नेपाल पठाउनुहोस । यस्तो भएमा तपाईको कालो धन बिदेशमा कमाएको आय जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा कुनै तपाई बिरुद्घ अनुसन्धान भएमा पनि त्यो सम्पत्तिको बास्तबिक श्रोत पत्ता लगाउन करीब करीब असम्भब जस्तै हुन्छ ।
तिम्रो मेरो हिड्ने बाटो कता कता मोडियो
छुट्टिएको हाम्रो साथ कहिले पो जोडीयो
जुनी जुनी सगै हिड्ने बाचा कसम तोडियो
छुट्टिएको हाम्रो साथ कहिले पो भेटियो
थाकिसके कुददा कुददै यो घना सहर
तिम्रो यादले पोल्न थाल्यो ल्याइदेउ न जहर
बिर्सिन तिमीलाई गाह्रो भो सम्झन्छु हर प्रहर
तिमि मेरो पिडा भयौ, हैनौ मेरो रहर
(पिडित साथिमा समर्प्रित)
Category: Sahitya Blog, नेपालीमा ब्लग